कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम : निजी विद्यालयले पुरानै प्रक्रियाअनुसार भर्ना थाले:: Naya Nepal
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम : निजी विद्यालयले पुरानै प्रक्रियाअनुसार भर्ना थाले
कक्षा ११ मा विद्यालय तहअनुसार नै पढाउने गरी पाठ्यक्रम बनेको छ।
प्लस-२ मै संकायअनुसार पठनपाठन हुँदै आएको थियो।
अब त्यो सबै हटेर साधारण तरिकाले पठनपाठन गर्नुपर्नेछ।
तर, निजी विद्यालयहरूले भने पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार भर्ना खोलेका छन्।
काठमाडौं। शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्षदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। तर, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै संस्थागत विद्यालयहरूले भने पुरानै पाठ्यक्रम (संकाय प्रणाली) अनुसार भर्ना आह्वान गरेका छन्।
जबकि शिक्षा मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भर्ना प्रक्रियासमेत रोकेको छ। माध्यमिक तहमा भर्ना प्रक्रिया रोकेको सरकारले कक्षा ११ मा भने भर्ना आह्वान हुँदासमेत केही गर्न सकेको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्षदेखि कक्षा ११ मा जसरी पनि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाउनुपर्ने भनेको छ। तर, नाम चलेका केही निजी विद्यालयहरूले भने संकाय प्रणालीअनुसार नै भर्ना आह्वान गरेका हुन्।
काठमाडौंको नाम चलेको ट्रिनिटी कलेजले असोज २ गते ‘इन्ट्रान्स’ नै गर्दैछ। विज्ञान, मानविकी र व्यवस्थापन संकायका विषयहरू पढाइ गर्दै आएको कलेजले पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा भर्ना आह्वान गरेको हो।
त्यस्तै काठमाडौंको अर्को नाम चलेको गोल्डेन गेट कलेजले समेत पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार भर्ना आह्वान गरेको छ। विज्ञान, मानविकी र व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत कक्षा ११ मा अनलाइनमार्फत् भर्ना आह्वान गरेको हो।
विज्ञान र व्यवस्थापन विषय अध्यापन गराउँदै आएको कमलपोखरीमा रहेको किस्ट कलेजले समेत कक्षा ११ का लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला गरेको छ। पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार नै भर्ना आह्वान गरेको हो।
धेरैजसो निजी विद्यालयहरूले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा संकायमा भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन्।
‘जसरी पनि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउनुपर्छ’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने जसरी भए पनि विद्यालयहरूले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउनुपर्ने जनाएको छ।
केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनुको विकल्प नभएको बताए।
संकाय प्रणाली अन्त्य भइसकेको भन्दै त्यहीअनुसार भर्ना आह्वान गरेको भए त्यो गैरकानूनी हुने उनको भनाइ छ। यदि त्यसरी भर्ना आह्वान गरिएको भए विद्यार्थी र अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्ने बताए।
विद्यालय तथा सरोकारवाला निकायहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गर्न नसकिने जनाउँदै आएका छन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन नसकिने बताए।
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाउन चुनौती रहेको बेला नयाँ लागू गराउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने तोकेभन्दा अन्य पाठ्यक्रम पढाएको खण्डमा कारबाही गरिने बताए।
“पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको पाठ्यक्रमअनुसार नै परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिन्छ। अनि विद्यार्थीहरूले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार कसरी परीक्षा दिन पाउने? तलमाथि गरे कारबाही गर्छौं,” प्रवक्ता शर्माले भने।
त्यस्ता विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले निगरानी र अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
के हो नयाँ पाठ्यक्रम ?
संकाय प्रणाली खारेज गरिएसँगै कक्षा ११ मा विद्यार्थीहरू कक्षा ९ र १० को जसरी ऐच्छिक विषय छान्न पाउँछन्। जसरी कक्षा ९ र १० मा ६ वटा अनिवार्य हुन्छ र दुईवटा ऐच्छिक विषय छान्न पाइन्छ।
त्यसरी नै कक्षा ११ मा पनि नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ। विद्यार्थीले तीनवटा विषय छान्नुपर्नेछ।
ऐच्छिक विषयका लागि चारवटा विषयगत समूह बनाएको छ। ती समूहबाट विद्यार्थीहरूले तीनवटा विषय छानेर पढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि केन्द्रले करिब एक सय ऐच्छिक विषय बनाएको छ।
आम नागिरकलाई प्रहरीले गर्ने व्यवहार दुरुस्त, न्यायिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ : आइजीपी
लोकसेवा परीक्षामा कोभिड संक्रमितलाई विभेद किन?
भर्खरै आयो जानकारी, अब कक्षा १२ को परीक्षा होम सेन्टरबाट
कक्षा १२ को परीक्षा मङ्सिरमा
नेपाली सेनालाई सदैव सम्मान र सहयोग गर्छु : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल